Uqophe umlando udokotela owakhula elusa | Isolezwe
Uqophe umlando udokotela owakhula elusa
intandokazi / 29 November 2018, 1:30pm / ZANELE MTHETHWA
AKAKHULANGA etotoswa uDkt Lindiwe Sidali othe wafunda nokwelusa izinkomo ongowesifazane wokuqala omnyama ukuba yiCardiothoracic surgeon kuleli
UQOPHE umlando udokotela owakhula elusa izinkomo, osebe ngowesifazane omnyama wokuqala ukuba yiCardiothoracic Surgeon. UDkt Lindiwe Sidali (35), osebenza esibhedlela eNkosi Albert Luthuli Central eThekwini, ungomunye wodokotela abambalwa abelapha izifo ezihlobene nenhliziyo namaphaphu e-Afrika. Uthe akubanga lula ukufika kuleli zinga njengoba eke waba yedwa kodokotela abebeqeqeshwa kulo mkhakha.
UDkt Sidali, oseneminyaka eyishumi engudokotela, wafunda eCuba waqedela ukufundela ukuba yiCardiothoracic Surgeon e-University of KwaZulu-Natal.
Uthe kumenza athobe ukuthi nguye yedwa ongowesifazane kulo mkhakha okusakhonya kuwo abesilisa.
“Indlela ibinzima futhi inezinselelo kodwa kuningi engikufundile. Bengingeke ngiphumelele ukuba bebengekho abantu abebengiseka ngisho sekunzima,” kuchaza yena.
UDkt Sidali wakhulela emndenini wezingane eziyisishiyagalombili, eDutywa e-Eastern Cape, wabuye wakhulela eNorth West lapho uyise ayesebenza khona ezimayini.
“Ngaqeda * -matric eRakgatla High eWonderkop ngase ngithola umfundaze eMnyangweni wezeMpilo eNorth West ngayofunda eCuba. Abazali bami bebekholelwa ekunikeni abesifazane amathuba bekholwa wukuthi intombazane kumele izimele. Sakhuliswa ngokufana nabafowethu nabo befundiswa ukupheka nami ngafundiswa ukwelusa izinkomo,” kusho yena.
Echaza ngomsebenzi wakhe kulo mkhakha uthe usiza iziguli ezinezifo ezithinta inhliziyo, amaphaphu nezinye izitho ezingaphakathi. Uthe lezi ziguli zisuke zidinga ukwelashwa okuyisipesheli kwesinye isikhathi kudingeka zihlinzwe. Wakhuthazwa othisha bakhe nomndeni ukuthi abe ngudokotela wavolontiya emtholampilo wangakubo eWonderkop ngo-2000 kuya ku-2001.
“Ngangifuna ukubona ukuthi umsebenzi engingakwazi yini ukuwenza lo. Onesi emtholampilo bangikhuthaza bathi angifundele ubudokotela ngezwa nangohlelo lwaseCuba. Bengifuna nami ukuba isibonelo emphakathini ngoba ngiyathanda nokusiza abantu.”
UDkt Sidali uthe izifo zenhliziyo ziyinkinga wanxusa abantu ukuthi bazinakekele. Uthe ukudla ngendlela efanele nokuzivocavoca kungabanciphisela umthwalo bengodokotela kulo mkhakha. Uveze nokuthi abantu kumele bajwayele ukuzihlola izifo ezihlobene nenhliziyo.
Ebuzwa ngokushoda kwabesifazane kulo mkhakha uthe yingoba kusanemigoqo evimbile. Ulinganise ngokungabi nomengameli wesifazane kuleli wathi abesifazane abakanikezwa ngokwanele amathuba futhi abasekwa uma behluleka.
“Sidinga ukuba nabesifazane abaningi abazoba yisibonelo ezinganeni zamatombazane emphakathini. Lokhu kungenzeka uma abesifazane bevulelwa amathuba futhi basekwe ngokulinganayo nabesilisa,” kusho yena.
Uma engekho emsebenzini uDkt Sidali uthanda ukubhala izindaba zothando athe usazibhalela abangani kuphela. Uzimisele nokuqhubeka nezifundo zakhe emkhakheni weCongenital Cardiac Surgery.